Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Agụụ zuru ụwa ọnụ bụ Nsogbu Dị Iche Kasị Ọtụtụ Ndị America
“Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị America ghọtara na agụụ ụwa bụ nnukwu nsogbu, na nsogbu ihu igwe bụ nsogbu agụụ. Ugbu a, ndị ndu anyị ga -agbarịrị mbọ mee ihe gbasara nchegbu anyị, ”ka Dr. Charles Owubah, onye isi oche, Action Against Hunger kwuru.
Iji mee ncheta ụbọchị nri ụwa na Ọktọba 16, Action Against Hunger, onye ndu na -anaghị akwụ ụgwọ na mmegharị ụwa iji kwụsị agụụ, taa wepụtara nsonaazụ nyocha nke ihe karịrị ndị okenye US 2,000 mere n'aha ha site na The Harris Poll na -egosi na 86% nke ndị America kwenyere na agụụ zuru ụwa ọnụ ka bụ nnukwu nsogbu. Mgbakwunye 73% nke ndị America na-ekwu na mgbanwe ihu igwe ga-amụba agụụ n'etiti obodo ndị dara ogbenye n'ụwa, na ihe karịrị ọkara (56%) nke ndị na-aza ajụjụ kwuru mba ndị bara ọgaranya, dị ka US, kwesịrị inyere mba ndị na-enweghị ego aka ịkwụ ụgwọ maka mmegharị maka ihu igwe. mgbanwe.
“Gburugburu ụwa, nde mmadụ 811 na -ehi ụra agụụ kwa abalị - na n'ọtụtụ akụkụ ụwa, agụụ nwere ike igbu mmadụ. Anyị ga -eme kwa ụbọchị ụbọchị nri ụwa ruo mgbe anyị ga -emezu ebumnuche anyị nke ịkwụsị agụụ maka mmadụ niile, maka ọdịmma, ”ka Dr. Owubah kwukwara.
Ihe nchoputa ihe omuma ndi ozo gunyere:
• Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ndị America niile na -echegbu onwe ha maka mmụba nke ọnụ ahịa nri n'ihi mgbanwe ihu igwe. Na mgbakwunye, 46% nke ndị America kwuru na n'ime ihe kacha echegbu ha maka ọgbọ na -abịa bụ "ibi n'ụwa nke nri dị obere (ya bụ, ụkọ nri n'ihi oke ikuku)."
• Boomers nwere ike ịsị na agụụ zuru ụwa ọnụ ka bụ nnukwu nsogbu. Ịmata agụụ agụụ zuru ụwa ọnụ dị ka nnukwu okwu bụ ihe ndekọ ọnụ ọgụgụ n'etiti ndị Boomers (afọ 57-75) ndị nwere ike karịa Gen Z (afọ 18-24) na Gen X (afọ 41-56) ikwere na agụụ ụwa ka bụ nnukwu nsogbu. n'ụwa taa (89% vs. 81% na 83%).
• 75% nke ndị America na -eche na mgbanwe ihu igwe na -eyi ọdịnihu agbụrụ mmadụ egwu, 74% kwenyere na anyị niile - gụnyere otu dị ka gọọmentị, ndị anaghị akwụ ụgwọ, na azụmaahịa - kwesịrị imekwu ihe iji kwụsị mgbanwe ihu igwe. Nnyocha yiri nke ahụ sitere na Action Against Hunger UK hụrụ ụdị nchegbu ahụ n'etiti ọha ebe ahụ.
• 60% nke ụmụ nwoke, 68% nke Gen Z, na 76% nke ndị isi ojii America kwenyere na mba ndị bara ọgaranya, dịka US, kwesịrị inyere mba ndị nwere obere ego aka ịkwụ ụgwọ maka mmegharị maka mgbanwe ihu igwe. N'ime ụmụ nwoke, 60% kwenyere na ụzọ a, ma e jiri ya tụnyere 53% nke ụmụ nwanyị. 76% nke ndị isi ojii America na-abụghị onye Hispanik kwenyere na mmetụta a, ma e jiri ya tụnyere naanị 50% nke ndị ọcha America na-abụghị Hispanic na 61% nke ndị Hispanic America. 68% nke Gen Z na 65% nke puku afọ kwenyere, dịka naanị 52% nke Gen X na 47% nke Boomers.
Nchọpụta Action Against Hunger na -abịa na 2021 Global Hunger Index, nke chọpụtara na agụụ ka dị “njọ, na -eyi egwu, ma ọ bụ na -eyi oke egwu n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba 50” yana akụkọ United Nations kwuru na 1 n'ime mmadụ 33 n'ụwa niile chọrọ enyemaka mmadụ.
“Mmata ma ọ bụrụ nzọụkwụ mbụ dị mkpa. Ugbu a, ụwa chọrọ ụzọ dị irè na ịza ajụjụ iji lebara agụụ na mgbanwe ihu igwe anya dị ka ihe egwu ahụike ọha na -abawanye, "Dr. Owubah kwuru. “Ịghara ilebara agụụ anya nwere ike na-akpaghasị steeti ndị na-esighị ike, ebe agụụ bụ ma ihe kpatara esemokwu. Mgbe anyị na -etinye ego n'ịlụso agụụ ọgụ na ịchekwa ndụ, anyị na -etinye ego n'ọdịniihu: nyocha egosila na $ 1 ọ bụla ejiri luso nsogbu na -esi n'erighị ihe na -edozi ahụ na -eweta ihe ruru $ 16 nloghachi na ọha mmadụ. "
The Harris Poll mere nyocha a na ntanetị n'ime United States n'aha Action Against Agụụ n'etiti Ọktoba 12-14, 2021 n'etiti ndị okenye US 2,019 dị afọ 18+. Nnyocha a n'ịntanetị esiteghị na nlele nwere ike, yabụ enweghị atụmatụ nke njehie nlele usoro enweghị ike gbakọọ. Maka usoro nyocha zuru oke, gụnyere mgbanwe dị arọ na nha nlele otu, biko kpọtụrụ Shayna Samuels, 718-541-4785 ma ọ bụ [email protected]
Action Against Hunger bụ ọgbakọ anaghị akwụ ụgwọ na -eduga mmegharị zuru ụwa ọnụ iji kwụsị agụụ n'oge ndụ anyị. Ọ na -ewepụta ihe ngwọta ọhụrụ, na -akwado mgbanwe, na -erute nde mmadụ 25 kwa afọ yana mmemme mgbochi agụụ yana ọgwụgwọ. Dị ka ụlọ ọrụ na -anaghị akwụ ụgwọ na -arụ ọrụ n'ofe mba 50, ndị ọrụ ya 8,300 raara onwe ha nye na -emekọ ihe ọnụ na -akpata agụụ, gụnyere mgbanwe ihu igwe, esemokwu, enweghị ike na ọnọdụ mberede. Ọ na -agba mbọ imepụta ụwa agụụ agụụ na -agụ, maka mmadụ niile, maka ọdịmma.